बेलका नगरपालिकामा भएका भ्रष्टाचारको प्रमाण मसँग छ : उपमेयर चौधरी (अन्तर्वार्ता) - हाम्रो शब्द
गएको ७ साउनमा उदयपुरको बेलका नगरपालिकाकी उपमेयर राजकुमारी चौधरीले सामाजिक सञ्जाल (फेसबुक) मार्फत राजिनामा घोषणा गरिन् ।
उनले एक पोस्ट सेयर गरिन्, ‘उपमेयर पद पार्टीलाई हस्तान्तरण गर्न चाहन्छु । जनतासँग माफी माग्न चाहन्छु । काला कर्तुतहरूका विषयमा कार्यान्वयन हुँदैन । धिक्कार छ दुइतिहाइ सरकार !’
उपप्रमुख चौधरीले पटकपटक भनिन्, ‘नगरपालिकाभित्र भ्रष्टाचार व्याप्त छ ।’ नगरको उपमेयरले नै स्वयं भ्रष्टाचार छ भन्दै राजिनामासम्म घोषणा गर्नू सामान्य मामला होइन । उनको आरोपलाई गम्भिर रुपमा लिएर जनताले नगरपालिका र मेयर दुर्गाकुमार थापाविरुद्ध ओन्दोलसमेत गरेका थिए ।
नगरभित्र प्रतिपक्षको भुमिकामा रहेको नेपाली कांग्रेस, जनता समाजवादी पार्टी, राप्रपालगायतले संयुक्त विज्ञप्ति निकालेर बेलकामा भएको भनिएको भ्रष्टाचारको छानबिन गर्नुपर्ने माग गरे ।
उपमेयरको स्टाटसले बेलका अशान्त बन्यो । ओन्दोलन दबाउँन प्रहरीले बल प्रयोग गर्दा केहि ब्यक्ति घाइतेसमेत भए । तर त्यसलगत्तै ११ साउँनमा उनले आफ्नो स्टाटसलाई सञ्चारमाध्यमले बंग्याएको आरोपसहित एक प्रेस नोट जारी गरिन् । त्यसमा उनले आफुले राजिनामा घोषणा गर्नुको कारणबारे एक शब्द बोलिनन् ।
भ्रष्टाचार भएको भन्दै सार्वजनिक रुपमा उपमेयरले आफ्नै नगरपालिाकाविरुद्ध लगाएको आरोप मेयर–उपमेयर वा कर्मचारीबीचको आपसी मनपुटावको तीतो अभिव्यक्तिका रुपमा मात्रै लिइनु हुँदैन । त्यसैले हामीले त्यसलाई खोतल्ने प्रयास गरेका छौँ ।
के बेलकामा साच्चिकै भ्रष्टाचार भइरहेको छ त ? उपमेयरको ओरोप सार्बजनिक खपतमा मात्रै सीमित गरिनु हुन्छ कि हुँदैन ? उपमेयर चौधरीसँग हाम्रो शब्दका शिशिर भट्टराईले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश यसपकार छ ।
बेलका नगरपालिका नमुना बन्दैछ हैन ?
नमुना बन्दैछ भनेर हाल्ला त गरियो । बन्दैछ । तर, भित्रको बास्तविकता अर्कै छ । किनभने प्रमुख र उपप्रमुखकैबीचमा विवाद छ भने यो समानताको कुरा छ नी त्यसमा खाडल गरिएको छ । बलियोले अबलालाई थिच्ने । यो चाहिँ सामन्तवादको प्रबृति छ ।
तपाईँलाई के लाग्छ ? उपमेयरको हिसाबले जति काम गर्न पाउँनुपथ्र्यो, त्यो पाउँनुभएको छ नगरपालिकामा ? काम गर्न सहज छ ?
सहज त छैन । समस्या छ । किनभने…….
नगरपालिका भित्रैबाट समस्या छ ?
नगरपालिका भित्रैबाट समस्या छ । किनभने म महिला भएकै कारणले गर्दा विभेदमा छु क्या…, विभेदमा छु । जस्तोकी घरभित्र बसेका महिलालाई एउटा पुरुष गार्जेनले थिचोमिचोमा पारेका हुन्छन्, विभेदमा पारेका हुन्छन् । त्यसैगरी नै यो राजनीतिक दवाव, सामान्तवादका कारणले गर्दा म चाँहि विभेदमा छु ।
तपाइले एकचोटी सामाजिक सञ्जालमार्फत राजीनामा दिन्छु भन्नुभएको थियो नी ?
यो चाँहि पार्टीकै कारणले गर्दा हो । किनभने हामी (मेयर–उपमेयर) फरक पार्टीको भएको भए अर्कै कुरा हुन्थ्यो, हामी एउटै पार्टीको भएर पनि धेरै कुराहरु सल्लाह नभएको कारणले गर्दा यो कुराहरु आकै हो । किनभने म किन यो तनाब खेपिरहनु पर्ने ? मलाई जनता छैन ? जनता छ त साथमा । जनता साथमा भएता पनि यो राजनीतिक विभेदको कारण, यो राजनीतिक समस्याको कारणले गर्दा मैले जनतालाई किन अलमल्याई राख्ने ? जनतासँग जुन कसम खाएर आएँ…….।
अनि तपाइँले सत्य कुरा जनतालाई भन्नूभयो ?
……(हल्का आक्रोशित हुँदै)… मैले जनतालाई सत्य कुरा भनेको । किनभने जनता बाहिरबाट वाच गरिरहेका (हेरिरहेका) छन्, तर बोल्न सकिरहेका छैनन् ।…..
तपाइँले कुरा सच्याउँनुभयो नी पछि ? उल्टै मेरो राजीनामा बिषयलाई सञ्चारमाध्यमले बंग्याए भन्नुभयो ?
राजनीतिक दवावको कारणले गर्दा सच्याएको नी त, त्यतिकै सच्याएको होइन । बाध्यता पारिएको कारणबस सच्याएको । जुन एउटा स्वतन्त्रता छ, त्यो स्वतन्त्रता पार्टी संगठनभित्र नहुँदो रछ । किनभने त्यो पार्टी संगठन भित्र बसेर, रहेर पनि काम गर्नुपर्दो रहेछ भन्ने कुरा महशुस गरेको छु । हरेक कुराले गर्दा थिचिएर सच्याउँनुपर्यो । जुन स्वतन्त्रता छ, जुन लोकतन्त्र छ, त्यो चाँहि नहुँदो रहेछ । पार्टी भित्रै अंकुश छ ।
तपाई पार्टीको कुन कमिटीमा हुनुहुन्छ ?
म चाँहि नगर कमिटीमा छु ।
अब कसरी काम गर्ने ? अझै २ बर्ष कार्यकाल बाँकी छ । यसरी भित्रै किचलो हुँदा काम गर्न समस्या होला ?
अहिले पनि….अहिले पनि…. काम गर्न समस्या छ । एकदम छ । अहिले पनि भन्नुहुन्छ भने नगर प्रमुख एकतातिर छ, उपप्रमुख एकातिर छ ।
तपाइलाई एउटा कुरा भनौँ, इनरुवाकी उपप्रमुख जमुना गौतमले केहि समयअघि पत्रकार सम्मेलन नै गरेर ‘आफ्नै नगरपालिकाविरुद्ध अख्तियार जान्छु । मलाई काम गर्न पनि दिइएन, घेराबन्दीमा पारियो भन्नुभयो ।’……..
(हतारहतार)….राम्रो कुरा हो । राम्रो कुरा हो त यो ।…..
मेरो कुरा सक्न दिनून, तपाई उपमेयरहरु समस्यामा हुनुहुन्छ कि के हो जताततै ?
मलाई राम्रो लाग्यो, खुसी लाग्यो । म धन्यवाद दिन चाहन्छु, इनरुवाको उपप्रमुखलाई । म राजिनामा दिन्छु भनेको थिएँ नी, हो त्यतिबेला सबै उपमेयरहरु मलाई धन्यवाद दिँदै हुनुहुन्थ्यो । धेरै उपमेयर ज्यूले फोन गर्नुभाथ्यो ।
इनहरुवाकी उपमेयरको भनाई छ, ‘के उपमेयर पद नगरभित्र थपना मात्रै हो ?’
हो……, यो बास्तविक कुरा हो । उहाँले बोल्नुभएको वास्तविकता हो । किनभने उपमेयर महिलालाई बनाएर यौटा न्यायमूर्ति भनेर कुनामा राखेर मात्रै थपना गरिएको हो क्या । यो वास्तविकता कुरा हो । मलाई मात्रै नभएर सबै उपमेयरलाई समस्या छ ।
अलिकदिन चुप लाग्छु, कार्यकाल सकिएपछि सम्पति शुद्धिकरणमा (मुद्दा) हाल्दिन्छु ।
पुरुषवादी र परम्परागत सोचको कारणले गर्दा महिला उपमेयरलाई हेपिएको छ ।
सरकारसँगै प्रहरी छ, प्रशासन छ । सबैथोक उहिसँग छ, जनता कुटाइ खाने, मर्ने मात्रै हो ।
महिला भएकै कारणले गर्दा विभेद हो ?
महिला भएकै कारणले गर्दा विभेद हो । किनभने उनीहरुको छलकपट छैन, सम्पति कमाउँन छैन । जनताको सेवा गर्न आएका उपमेयरहरु दवावमै छन् । जोजो पार्टीको ‘होहो’, ‘अँअँ’ भन्ने उपमेयर छन् भने त्यो उपमेयरलाई पार्टी धेरै राम्रो छ । तर हामी जनताको सेवा गर्न आएका जो उपमेयरहरु आवाज उठाउँछौँ, त्यो उपमेयरहरु पार्टीको लागि घातक भइसकेका छन् । अब पनि यस्तै अबस्था रहन्छ भने, विभेद भइरहन्छ भने पार्टीलाई म चुनौती दिन चाहन्छु, ….(आक्रासित हुँदै) पार्टीले कुपी बालेर खोज्न जानुपर्छ महिलालाई उपमेयर बनाउँनका लागि ।
काम गर्ने स्थिति नै छैन है ?
काम गर्ने स्थिति, वातावरण दिएको छैन नी त । थपना मात्रै राखिएको छ महिलालाई ।
अब के गर्ने हामी महिलाहरु अझै आन्दोलनमा लाग्नुपर्छ । त्यो अबस्यकता छ, उपमेयर ज्यूहरुलाई । किनभने आन्दोलनबाटै आएको हो नी त हामी । आजदेखि होइन, मैले ८ कक्षादेखि अनेरास्ववियूमा काम गरेर, महिला संगठमा पनि बसेर, महिला मानवअधिकारवादी रक्षक सञ्जालमा काम गरेर आएको भनेपछि १७।१८ बर्षसम्म मैले राजनीतिमा बिताएको छु । म त्यतिकै चुप लागेर बस्दिन । आन्दोलनबाट आएको हुँ, सबै कुरा बुझेको छु पनि ।
बेलका नगरपालिकामा भ्रष्टाचार पनि छ ?
छ नी, किन छैन ! …..(आक्रोशित हुँदै)…कसैको संरक्षणमा रहेर भ्रष्टाचार भइरहेको छ । भ्रष्टाचारलाई जोगाउँनुको कारण के हो त ? आफु नगरे पनि कसैमार्फत गराएर संरक्षण गर्नुको कारण के हो त ? भ्रष्टाचारीलाई संरक्षण गर्नू भनेर लेखेको छ कतै संविधानमा ? लेखेको छ भने….
कसले गर्यो त भ्रष्टाचारीलाई संरक्षण ?
गरेको छ नी ।
कारवाहीको वातावरण बनाउँनु त तपाइँ उपमेयर हो ?
कारवाही त गर्ने, तर चाँहि भन्दैछु त पार्टीले अंकुश लगाएको छ । कसरी गर्ने ! पार्टीको दवावभित्र रहनुपर्ने अबस्था हुन्छ । वास्तविक कुरा ! ठिकै छ अब जेजे गर्दा पनि अलिकदिन चुप लाग्छु, कार्यकाल सकिएपछि सम्पति शुद्धिकरणमा (मुद्दा) हाल्दिन्छु । अहिले म उपमेयर हुँदाको अबस्थामा पैनेँ ३ कण्ठा जग्गा बेचेर मैले मेरो ऋण पनि तिर्न सकेको छैन । अहिले पनि छ ऋण । अनि भ्रष्टाचार नगरी अरुको सम्पति चाँहि कहाँबाट आउँछ ?
बाहिरबाट हेर्दा त बेलका राम्रै छ, भित्र अर्कै छ कि के हो ?
…..(मन्द मुस्कानसहित).. बाहिरबाट हेर्दा त राम्रो छ नी….। किन राम्रो छैन..! सबैथोक राम्रो छ । सबैथोक हाई..हाई…हाई भइराखेको छ । तर भित्रको खोक्रो के छ कसैलाई थाहा छैन ।
उपमेयर ज्यूले भन्दिनूपर्यो नी त भित्रको खोक्रो के छ ?
उपमेयर ज्यूले त बोलिराखेको छ….। …..(मन्द मुस्कानसहित)..उपमेयर ज्यूले बोलेको छैन र ! बोलिराखको छ, भनिराखेको छ ।
भनेर के गर्नू ? राजीनामा दिन्छू, भ्रष्टाचार भयो भन्नूभयो । फेरी ब्याक सर्नूभयो ?
भनिराखेको छु । पार्टीले अंकुश लगायो । किनभने यौटा संगठनभित्र छु । संगठनभित्र रहेर ……
सिंगो (नेकपा) पार्टी भ्रष्टाचार चाहन्छ त ?
छ नी ! पार्टी कसैको चाप्लुसी गरिरहेको छ भने त्यसको कारण के हो त ? च्याप्लुसी गर्ने पार्टीमा १,२ जनाको मात्रै कुरा चल्छ । माथि पनि २ जना मात्रै भएपछि पार्टी चलिरहेको छ । माथिदेखि चलसम्म त्यहि छ । अन्य नेताकार्यकर्ता टुलुटुलु हेरिराखेका छन् । बोल्दा आफैँले फ्याकेको थुप आफ्नै मुखमा पर्ने हो की भन्ने डरले बोल्न नसकेको हो ।
तपाइको निष्कर्श बेलकामा भ्रष्टाचार छ ?
तपाई त्यसविरुद्ध लडदै हुनुहुन्छ ?
लडदैछु । भित्रैदेखि लडदैछु ।
तपाइँले भ्रष्टाचार भयो भनेर पार्टी कमिटीमा कुरा राख्नु भएन ?
राखेर के गर्नू ! कसले सुन्ने ? कसले सुन्दिने ? जो बोल्छ त्यो नराम्रो भइहाल्दो रछ । बोलचाल नै बन्द छ, भ्रष्टाचारको कुरा उठाएदेखि ।
तपाई र मेयरबीच बोलचाल छैन ?
मेयर र उपमेयरको बोलचाल नै छैन ?
छैन । छैन । आबस्यक काम पर्छ भने, त्यस्तै इमर्जेन्शि काम पर्छ भने, नबोली नहुँने छ भने उहाँ पनि बोल्न बाध्य हुनुहुन्छ, म पनि बोल्न बाध्य हुन्छु । नभए बोलचाल बन्द जस्तै छ ।
तपाइहरुको त केपी–प्रचण्डको जस्तै भयो त ?
…..(हाहाहाहा)… होला ।
शिक्षाको अबस्था के छ बेलकामा ?
शिक्षाको अबस्था के छ, बाहिर–बाहिर म देखिराखेको छु, राम्रो छ । तर, भित्र राम्रो छ–छैन त्यो चाँहि भन्न सकिदैँन । किनभने अहिलेसम्म शिक्षाको मिटिङ्गमा उपमेयरलाई बोलाउँदैन । कुनै साखाको कार्यक्रममा उपमेयरलाई बोलाउँदैन । के कार्यक्रम हुन्छ ? कसो हुन्छ ? के हुन्छ ? उपमेयरलाई बोलाउँदैन । मेयरलाई कोरोना संक्रमण भएको थियो । म थिएँ नी त कार्यबाहक । म कार्यबाहक हुँदा पनि काम के भइरहेको छ मलाई थाहा नदिइने । सबै डकुमेन्ट बाहिर–बाहिर लाने मेयरको साइन गराएर ल्याउँने । के छ, कसो छ मेयरसाव फोनमा भनिहाल्नु हुँने । त्यति भइसकेपछि उपमेयरको कामै छैन । ……(आक्रोसित हुँदै)…त्यसरी हुन्छ कार्यबाहक ? कार्यबाहक भएपछि त सम्पुर्ण कुरा थाहा हुनुपर्यो नी ।
तपाई समस्यामा छु भन्नुहुन्छ । भ्रष्टाचार छ भन्नुहुन्छ । यसमा पार्टीले त तपाइलाई सहयोग गर्नूपर्ने हो । पार्टीमा कुरा राख्नुभएन ?
पार्टीको त्यहाँदेखि बैठक नै भएको छैन । कहाँ कुरा राख्नु, कसलाई राख्नु ? राखे पनि कसले सुन्दिने ? तिनीहरु त्यतै छन्, (भ्रष्टाचारीकै पक्षमा) त्यस्तै अबस्थामा छन् ।
भनेपछि राम्रो काम गर्नेलाई एक्ल्याए ?
एक्ल्याए । राम्रो काम गर्नेको त ठाउँ नै छैन । कहिँ छैन ठाउँ । राम्रो बोल्नेको, सभ्य बोल्नेको, राम्रो काम गर्नेको कहिँ छैन ठाउँ । जसले सानो कुरा छ भने ठुलो मिडियावाजी गर्छन, ठुलो प्रचारप्रसार गर्छन त्यो चाँहि हाइहाई ।
तपाइचाहिँ आफ्ना कामको प्रचार गर्नूहुन्न ?
छैन, म प्रचारप्रचारमा मोह राख्दिन । अहिले पनि पत्रकार नियुक्ति गरेको छ (प्रेस सल्लाहकार) उहाँ अहिलेसम्म उपमेयरको कार्यक्रममा जानुभएको छैन । कहिलेकाहीँ यसो फोन गर्दा पनि ‘ए म त इटहरी छु, गाइघाट छु’ भन्नुहुन्छ । म किन बोलाउँनू पत्रकारलाई ? पत्रकारलाई नगरपालिकामा नियुक्ति दिएको छ, उहाँ मेयरको कार्यक्रममा मात्रै जाने होे ?
महिला उपमेयरहरु किन यसरी घेराबन्दीमा परे ?
एकचाँहि महिला उपमेयरहरु ठग्न नजान्ने, ढाँट्न नजान्ने, सहि बोल्ने ! अर्कोचाँहि महिला भएकै कारण हामी महिला उपमेयर घेराबन्दीमा छौँ । काम गर्न दिइएको छैन । यो सामान्दवादको प्रबृति छ, यो त्यतिकै टुट्दैन क्या । जबसम्म महिलालाई भित्रदेखि स्वीकार्दैनन्, तबसम्म यो सामन्तवाद टुट्दैन । ‘म पुरुष हुँ’ भन्ने दम्भ पुरुषमा छ नी त । पुरुषवादी र परम्परागत सोचको कारणले गर्दा महिला उपमेयरलाई हेपिएको छ । मुखमा र कागजमा परिवर्तन भएको छ, ब्यबहारमा भएको छैन । संबिधानमा लेखिएको छ, तर ब्यबहार छैन क्या ।
तपाइको तीनबर्षे कार्यकाल सोचेजस्तो भयो ?
भएन मेरो । सोचेजस्तो भएन । मत (भोट) कै कुरा गर्नुहुन्छ भने मेयरसावको भन्दा बढी मेरो छ ।
जनमत चै तपाइको बढी छ काम गर्न चाँहि दिएनन् हैन ?
तपाइहरु (मेयर–उपमेयर) को पहिलादेखि नै खटपट् हो ?
हैन, पहिलादेखि नै खट्पट् त हैन । खै के कारण, कसो कारण बीचमा खट्पट भयो, त्यो मैले बुझ्न सकिन । पहिला ठिकै थियो बीचमा बिग्रियो । कसरी बिग्रियो किन बिग्रियो ?…
अनि तपाई स्टाटस लेखेर राजीनामा नै दिन्छु भन्न बाध्य हुनुभयो ?
म किन सोधेर जानू उहाँलाई ? यदि जान्छु भने संबिधानमा लेखिएको छ, कानुनमा लेखिएको छ, कार्यबिधिमा लेखिएको छ, त्यो अनुसार जान्छु नी ।
हो । किनभने म कुनै कार्यक्रममा जान्छु भने मेयरले अंकुशो लगाउँने क्या । ‘तपाईँ कहाँ जानुभएको थियो ? किन जानु भएको थियो ?’ भनेर किन सोध्ने मलाई ? उहाँ जाँदै हुनुहुन्थ्यो भने मलाई सोधेर जानुहुन्थ्यो ? म किन सोधेर जानू उहाँलाई ? यदि जान्छु भने संबिधानमा लेखिएको छ, कानुनमा लेखिएको छ, कार्यबिधिमा लेखिएको छ, त्यो अनुसार जान्छु नी । कानुनको पालना त गर्छु । ७ दिन भन्दा बढी उपमेयर कहिँ गयो भने मेयरको स्वीकृति लिएर, जानकारी गराएर जानुपर्ने नियम छ । अनि एकदिनको कार्यक्रम छ, बिहान गाइघाट गएर बेलुका फर्कन्छु भने त्यस्ता कार्यक्रममा जाँदा मेयरलाई मैले सोधेर जानुपर्ने ….(आक्रोससहित)… ? मेयर ७ दिनसम्म बाहिर जाँदा कन्ट्याक (सम्पर्क) पनि नहुँने, मैले केहि बोल्न नपाउँने अनि म चाँहि कुनै कार्यक्रममा गएँ भने ‘तपाई कहाँ जानुभाथ्यो ? किन जानुभको ?’ भनेर उहाँले दवावमा राख्ने भनेपछि म कहाँसम्मको दवावमा रछु त !
तपाइले भ्रष्टाचार भएको भन्दै स्टाटस चाँहि लेख्नुभएको, त्यसपछि किन चुपचाप बस्नुभयो ?
मैले मनलाई बुझाउँनलाई लेखेको हो । यदि त्यो दिन मैले त्यो स्टाटस नलेखेको भए म आत्महत्या पनि गर्न सक्थे ।
त्यत्रो समस्यामा हुनुन्थ्यो ?
त्यत्रो म डुबिसकेको थिएँ । आफ्नो ज्यानको आफैलाई मलाई थाहा थिएन ।
स्टाटस लेखेपछि मन अलिक खुसी भयो ?
त्यसपछि मेरो मन अलिक शान्त भयो ।
दुःख बाड्नुभयो अरुसँग ?
दुःख बाँडे । स्टाटस लेखेपछि राती मैले मोबाइल स्वीच अफ गरेर सुतेको । राती निन्द्रा पनि लागेन ।
जनमत हुँदाहुँदै पनि काम गर्न नपाएको पीरले विरक्त लाग्यो ?
एकपटक मात्र हैन नी । पटकपटक पीडित बनाएको कारणले गर्दा समस्यामा थिएँ ।
आत्महत्या नै गरौैँजस्तो लाग्छ तपाइलाई ?
आत्महत्या त किन गर्नू ! बिरक्त भएर त्यतिबेला म डिप्रेसणको अबस्थामा पुगिसकेको थिएँ ।
बेलकामा भएको भ्रष्टाचारको प्रमाण तपाइसँग छ ?
छ नी । अहिले पनि छ ।
अनि किन सार्वजनिक गर्नुहुन्न ?
जनतालाई मैले भनिसके । जनतालाई मैले नभनेको होर !
तपाइलाई हजारौँ जनताले भोट दिएर पठाएको हो ?
त्यहि भएर त जनतालाई मैले भनिराखेको छु, भ्रष्टाचार भएको छ भनेर ।
भ्रष्टाचारको प्रमाण पनि दिनुपर्यो नी जनतालाई ?
प्रमाण छ नी त मसँग । मसँग प्रमाण छ ।
कहिले सार्वजनिक गर्नुहुन्छ ?
मेरो पद सकियोस्, त्यसपछि सार्वजनिक गर्छु । सम्पति शुद्धिकरणमा मुद्दा हाल्न अझै पनि म तयार छु ।
त्यत्रो प्रमाण छ ?
आरोप मात्रै त होइन नी ?
तर त्यतिबेलैको अबस्था राता…रात गाडिमा हालेर भेडेटार पुगेर यिनीहरुले सबै डकुमेन्टहरु मिलाए । त्यतिबेला मेरो बुद्धि पुगेन क्या । नत्र त्यतिबेलै मैले नगरपालिकामा छापा मानुपर्ने थियो । सबै साखामा लक लगाउँनुपर्ने थियो ।
रातारात भेडेटार लगेर डकुमेन्ट मिलाइयो ?
यता (बेलकामा) ३,४ दिन आन्दोलन भइराखेको छ । उता रातारात भेडेटार लगेर डकुमेन्ट मिलाइराखेको छ । गाडि रिजव गरेर गाइघाटबाट उहाँ (भेडेटार) पुयाइएको छ डकुमेन्ट । यौटा खरदारको तलब २२, २५ हजार हुन्छ, त्यो खरदारको करोडौँको सम्पति कहाँबाट आयो ? छ महिनामा फेरी अर्को घडेरी झुम्कामा किन्ने पैसा कहाँबाट आयो ?
अँ, खरदारले । अनि भ्रष्टाचार नभएर के भएको हो त ?
बेलकामा कार्यरत खरदार धमाधम घडेरी किन्न थाले ?
धमाधम । तपाई कतिपय कर्मचारी (बेलकामा कार्यरत) गएर हेर्नुहोस्, धमाधम घडेरी किनरहेको छ, घर बनाइरहेको छ । कहाँबाट आउँछ ? त्यहि २० हजार २२ हजार (तलब भन्न खोजिएको) बाट पुग्छ ?
कार्यपालिकामा, नगरसभामा तपाइको पक्षमा जनप्रतिनिधि होलान्, त्यहाँबाट कर्मचारीलाई नियन्त्रण गर्न सक्नुहुन्न ?
मुखले सबै ठिक्क पार्छन्, तर ब्यबहारमा छैनन् (साथ दिदैनन्) ।
बेलकाको भ्रष्टाचार रोक्ने कसरी ?
अब, एकजनाले रोकेर रोकिनछ र !
एकजना कसरी ? तपाइको पक्षमा हजारौँ जनता छन् ?
छ नी जनता त ।
तपाइको नगरको जनसंख्या कति छ ?
करिब ५० हजार ।
अनि, तपाई ५० हजार जनताको उपमेयर हो, दुइचारजनालाई मिलेर भ्रष्टाचार गर्न दिइरहने ?
जनताले आफै देखिराखेका छन् । मुल्यांकल गरिराखेका छन्, बुझेका छन् ।
लुट्न छुट् दिन त भएन नी ?
लुट्न त कसले छुट दिन्छ त ! त्यहि भएर मैले जनतालाई जानकारी गराएको छु । अब जनताले पनि खोज्नुपर्यो (भ्रष्टाचार) नी त । मैले सबै सूचना दिएको जनतालाई, देखाइदिएको । यसरी–यसरी भ्रष्टाचर भएको भनेर जानकारी त दिएको नी मैले । जनताले सूचनाअनुसार छानबिन गर्न पुग्नुको सट्टा आन्दोलन गर्न पुग्नुभयो त । आन्दोलन गरेर के गर्नु, उनीहरुले १ गाडी डकुमेन्ट भेडेटार लगेर रातारात मिलाए आएपछि कागजमा त मिलिहाल्यो नी त । अब कागजमा मिलेपछि त सबै सकियो नी त । सकिएन ?
सबै भ्रष्टाचारको प्रमाण कागज मिलाएर मेटे ?
१० दिन, १५ दिनसम्म मिलाएका छन् ६ जना कर्मचारीले ।
कुनकुन क्षेत्रमा भ्रष्टाचार छ बेलकामा ?
सबै क्षेत्रमा छ । कुनै पनि क्षेत्र बाँकी छैन ।
जस्तै कृषि छ । शिक्षा पनि भएकै हो, नभएको होइन । बोल्न नसकेको मात्रै हो ।
बोल्नु न तपाई किन बोल्न नसक्नु ?
किन बोल्नु अब ? म बोल्दिन । नमस्कार मात्रै गर्न चाहन्छु । यति बोल्दा पनि यथार्थ कुरा आउँदैन भने बोलेर के गर्नू ?
जनतालेत सडकमा आएर भ्रष्टाचारको छानबिन हुनुपर्छ भनेकै हुन् नी ?
यसो छ क्या, जनताले सरकारमाथि सोझै छानबिन गर्न सक्दैन । जनताले मात्रै मुखले बोल्छ । सरकारले त गरेको गरेकै छ । जनताले के गर्ने, सरकारसँगै प्रहरी छ, प्रशासन छ । सबैथोक उहिसँग छ, जनता कुटाइ खाने, मर्ने मात्रै हो ।
त्यतिबेला पनि जनताले कुटाई खाए ?
खाए । टाउको पनि फुटेको थियो ।
तपाइले आन्दोलन गर्ने जनतालाई के भन्नुभयो ?
धन्यवाद दिन्छु । धन्यवाद दिएँ । त्यतिबेला पनि आन्दोलन होइन, छानबिन गरौँ भनेर मैले भनेको हो । टेबुलमा आउँनुहोस्, म सबै कुरा भन्छु भनेको हो । उहाँहरु आन्दोलनमा मात्रै लाग्नुभयो ।
भ्रष्टाचारको बिषय राष्ट्रिय लेभलसम्म पुर्याउँनुभएकोमा सम्पुर्ण मिडियालाई धन्यवाद भन्न चाहन्छु । समस्या बेलकामा मात्रै होइन, अन्यन्त्र पनि छ । अन्य उपमेयरहरु पनि समस्यामा छन् । हामी उपमेयरहरु विद्रोह गर्ने स्थितिमा छौँ ।
-उपमेयर चौधरीसँग हाम्रो शब्दका शिशिर भट्टराईले गरेको कुरानीमा आधारित :
ओली प्रवृति यतिबेला प्रतिगमन, कुशासन र अल्पविकासको मुख्य वाहक हो : डा.भट्टराई